Buurmadow oo ka jawaabay hadalkii carrada dhaliyey | KEYDMEDIA ONLINE
Buurmadow oo ka jawaabay hadalkii carrada dhaliyey
MUQDISHO,Soomaaliya - Boqor Buurmadow ayaa raali-gelin ka bixiyey hadal uu dhawaan jeediyey, kaasoo ka careysiiyey guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Gobolka Banaadir oo si milgo leh ugu soo dhaweeyay Caasimadda.
Boqorka ayaa bilawgii todobaadkan ku faanay in beesha uu ka soo jeedo ay madax ka yihiin Kooxda Al-Shabaab, taasoo uu ku tilmaamay dowlad aan taladeeda lagula tartamin heybtiisa, isagoo ka tacsiyeeyey geeridii hoggaamiyihii Shabaabka Axmed Godane, oo Mareykanka duqeyn ku dilay September 2014 duleedka degmada Baraawe, G/Sh/Hoose.
Hadalkaas ayaa gil-gilay quluubta shacabka, taasoo abuurtay hadal-heyn fara-badan, iyadoo carrada uu dhaliyay laga dareemay qof walba oo Soomaaliyeed oo Al-Shabaab dhibka ay dalka iyo dadka ku hayso ka xun.
Boqorka oo arrintaasi ka jawaabayey, ayaa ka bixiyey raalli galin, isagoo sheegay inuu ahaa kaftan la siyaasadeeyey, waxaana uu bulshada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Banaadir uu ka dalbaday in la saamaxo.
Buurmadow ayaa xusay in aanu taageero u ahayn nidaamka Shabaabka, isla markaana uu ka soo horjeedo cid kasta oo dooneyso in ay hab sharci darro ah ku daadiso dhiigga dadka shacabka ah.
Boqorka ayaa sheegay inuu Muqdisho u yimid, isku soo dhaweynta ama xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Labada shacab ee ku kala nool Waqooyiga iyo Koonfurta, xilli la ogsoon yahay in booqashadiisa xamar ay daaran tahay boobka doorashooyinka Aqalka Hoose ee socda.
Raalli galinta Buurmadow ayaa ku soo aaddeysa, iyadoo Maamulka Gobolka Banaadir uu ku soo oogay dacwad, islamarkaana uu dalbaday in la soo xiro, waxaana la oggayn halka ay ku danbeyneyso dacwada.